Politika famerenam-bola - YTpals
Manolotra entana tsy azo ovaina tsy azo tsapain-tanana. Amin'ny maha mpanjifa anao dia tompon'andraikitra amin'ny fahazoana izany ianao amin'ny fividianana vokatra / serivisy ao amin'ny tranokalanay.
Mifandraisa amin'ny fanohanan'ny mpanjifa
Ny 99% amin'ireo olana dia azo vahana amin'ny mailaka tsotra. Mangataka aminao izahay hanatona anay amin'ny alàlan'ny Mifandraisa aminay pejy. Ny Departemantan'ny Serivisy ho an'ny mpanjifa dia hiverina aminao ao anatin'ny 24-72 (matetika latsaky ny 24 ora) miaraka amin'ny famerenana ny fanahianao sy ny vahaolana.
Fangatahana vola azo ekena
● Tsy fanaterana ny vokatra / serivisy:
Amin'ny tranga sasany dia miadana kokoa ny fotoana anaovana ny fizotrany ary maharitra elaela kokoa vao vita ny baikonao. Amin'ity tranga ity dia mamporisika ny hifandray aminay izahay raha mila fanampiana. Ny fangatahana tsy fandefasana dia tsy maintsy apetraka amin'ny Departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa an-tsoratra ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fametrahana ny baiko.
● Vokatra tsy voafaritra:
Ny olana toy izany dia tokony hotaterina amin'ny Departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny 7 andro aorian'ny andro nividianany. Ny porofo mazava dia tsy maintsy omena manaporofo fa ny vokatra / serivisy novidiana dia tsy araka ny voalaza ao amin'ny tranonkala. Ny fitarainana izay miorina amin'ny fanantenan'ny mpanjifa fotsiny na faniriany dia tsy voahaja.
● Politika fanafoanana ny famandrihana:
Rehefa mividy fisoratana anarana Enterprise, Elite na Celebrity ianao dia halefa ho azy amin'ny andro iray isam-bolana. Raha tsy mila ny famandrihana YTpals intsony ianao amin'ny fotoana sasany, mandefasa hafatra aminay amin'ny alàlan'ny anay Mifandraisa aminay pejy ary hametraka ny kaontinao ho tapitra amin'ny fiafaran'ny fisoratana anarana isam-bolana ianao. Tongasoa ianao hanafoana ny famandrihanao amin'ny fotoana rehetra. Raha nisoratra anarana tamin'ny 23 septambra ianao, ohatra, fa manorata aminay momba ny fanafoanana ny kaontinao herinandro vitsivitsy taty aoriana amin'ny 10 Oktobra, dia hapetrakay ny kaontinao hofoanana amin'ny 23 Oktobra, izay hifarana ny fisoratana anarana amin'ny volana ankehitriny. Raha tianao ny fanafoanana eo noho eo, ampahafantaro anay fotsiny izahay ary afaka manao izany ho anao koa izahay. Tsy adidinao ny mijanona misoratra anarana amin'ny fotoana rehetra, fa mila manoratra aminay ianao rehefa vonona ny hanafoana. Homaninay izany ary handefa hafatra fanamafisana ho anao.
● Politika famerenam-bola amin'ny famandrihana:
Raha mividy drafitra famandrihana ianao ary tsy faly amin'ny serivisy amin'ny antony rehetra, mifandraisa aminay ao anatin'ny 7 andro aorian'ny daty fandoavam-bola anao ary haverinay tanteraka sy hofoanana ny famandrihana anao. Raha mifandray aminay mihoatra ny 7 andro aorian'ny nanaovana ny fandoavam-bola ianao ary mangataka famerenam-bola, dia handinika ny kaontinao ny ekipanay ary raha heverinay fa mety dia haverinay amin'ny laoniny ny volanao. 7 andro lasa izay, tsy manan-jo hahazo famerenam-bola ianao.
Nanolo-tena ho afa-po
Mijoro eto ambadiky ny vokatraanay izahay ary mirehareha amin'ny fanaparitahana ny serivisy haino aman-jery sosialy kalitao avo lenta indrindra amin'izao fotoana izao. Tsy afaka manome valiny foana izahay, fa raha ao anatin'ny 7 andro dia tsy faly amin'ny volanao fotsiny ianao Mifandraisa aminay ary hahita vahaolana amin'ny ahiahinao izahay.